Casho Sharaf xalay Garowe loogu sameeyay Xubnihii ka qaybgalay Shirkii Garowe ee Baarlamaanka – Kalfadhi
Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa xalay casho Sharaf loogu sameeyay Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawa, iyo xubnihii la socday iyo Guddoomiyaasha baarlamaanada HirShabeelle, Koonfur Galbeed, iyo Jubbaland kuwaas oo ka qayb galay Shirka Golayaasha xeer dejinta dalka.
Xafladda Casho sharafta ah ee xalay ka dhacday magaalada Garowe ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Guddoonka baarlamaanka maamulka Puntland waxaana sidoo kale ka qaybgalay mas’uuliyiin kala duwan oo katirsan maamulka Puntland.
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo Xafladda ka hadlay ayaa u mahadceliyay dhamaan dadkii ka qayb-qaatay Xafladda isagoo sidoo kale mahadceliyay dhamaan dadkii ka qaybgalay Shirkii ka socday Garowe.
Shirkii magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ku soo dhamaaday oo ay yeesheen Guddoomiyaasha Golayaasha xeer dejinta dalka ee heer federaal iyo heer Dowladda Dhexe ayaa waxaa laga soo saaray Warmurtiyeed ay ku cadeed waxyaabihii looga hadlay.
Shirka ayaa xoogga lagu saaray qaybsiga tababarada, iska warqabka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka wadashaqeeneed ee baarlamaanka Soomaaliya ee dowlad Gabaleedyada iyo Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Golaha afhayeennada xeer-dejinta dalka oo isku cannaantay habacsanaanta fulinneed ee nuxurka shirarkooda